3 ㎡ ~ 8 ㎡ရေချိုးခန်းအလှဆင်ခြင်းဒီဇိုင်း၊ သင်စွန့်ပစ်သည့်အချိန်တွင်မတူညီသောစတိုင်များ
ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် /3㎡ ~ 8 ㎡ရေချိုးခန်းအလှဆင်ခြင်းဒီဇိုင်း၊ သင်စွန့်ပစ်သည့်အချိန်တွင်မတူညီသောစတိုင်များ
2021 / 04 / 07 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 777 0
ရေချိုးခန်းအလှဆင်မှုတွင်အကန့်အသတ်ရှိသောနေရာကိုမည်သို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာအသုံးချရမည်ဆိုသည်မှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အထူးဂရုပြုရန်အလှဆင်ဒီဇိုင်းနှင့်အပြင်အဆင်ပါရေချိုးခန်း၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်㎡ ~3㎡ရေချိုးခန်းအလှဆင်ဒီဇိုင်းအကျဉ်းချုပ်ရှိသည်။
3 ~4㎡ရေချိုးခန်း
အပူပိုင်းမိုးသစ်တောတွင်စတိုင်ဒီဇိုင်းကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းကဲ့သို့ပင်ရေချိုးခြင်းတွင်ပင် Zen ရှိသည်။ ပူနွေးသောရေကိုသွင်း, နှင်းဆီပွင့်ချပ်ဖြန်းဖြန်း, ကမ္ဘာပေါ်မှာရေချိုးအတွက်အနားယူထက်သာ။ ကောင်း၏အဘယ်အရာမျှမရှိ။
ကျန်းမာရေးနှင့်အညီညွတ်ဆုံးအစိမ်းရောင်သည်ရေချိုးခန်းနှင့်တွေ့သောအခါမှန်ရှေ့တွင်ကြည့်ကောင်းရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှကြာအောင်နေခြင်းသည် ၀ မ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အပေါ်ကသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခေါင်မိုး + ၀ င်းဒိုးမြင်ကွင်းကိုအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
တဖြည်းဖြည်းကျိုးပဲ့နေသောပန်းချီကားသည်အိပ်မက်မှအိပ်မက်မှအဖြစ်မှန်သို့ပြန်သွားရန်အိပ်ရာမှနိုးထပြီးသွားကိုသွားတိုက်ရန်နှင့်နံနက်အချိန်၌သင်၏မျက်နှာကိုဆေးကြောရန်အိပ်မက်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ထိုအရောင်သည်သင်နိုး။ အိပ်မက်၏လှပမှုကိုမြင်တွေ့စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
တဖြည်းဖြည်းကျိုးပဲ့နေသောပန်းချီကားသည်အိပ်မက်မှအိပ်မက်မှအဖြစ်မှန်သို့ပြန်သွားရန်အိပ်ရာမှနိုးထပြီးသွားကိုသွားတိုက်ရန်နှင့်နံနက်အချိန်၌သင်၏မျက်နှာကိုဆေးကြောရန်အိပ်မက်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ထိုအရောင်များသည်သင့်ကိုအိပ်ရာမှနိုး။ အိပ်မက်၏လှပမှုကိုမြင်တွေ့စေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ။
အကယ်၍ မိုးကောင်းကင်သည်ပြင်ပကြယ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေပါကပြတင်းပေါက်နားကရေချိုးနေသောပုံ၏အဓိပ္ပာယ်မှာလည်းလုံးဝစိတ်ကူးယဉ်ဆန်နေနိုင်သည်။ လက်တွေ့တွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်စေ၊ ကုလားကာတစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်သာမကလွတ်လပ်မှုသည်ဗေဒထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
Retro bathtub သည်စာပေလူငယ်များစွာ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာရေချိုးခြင်း၌ပျော်မွေ့သည်။ ပန်းချီလောက၏ပန်းချီကားကဲ့သို့ပင်ဒီမှာအိပ်ချင်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
5 ~ 6㎡ရေချိုးခန်း
ရေချိုးခန်းပရိဘောဂအရွယ်အစားသည်ကြီးမားသည်မဟုတ်သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်ရေချိုးခြင်း၊ သွားတိုက်တံခွက်၊ သင်တုန်းကိုမှန်နောက်ကွယ်တွင်ပါးနပ်စွာဝှက်ထားသော်လည်းအသေးအဖွဲကိစ္စများတွင်အသုံးပွုနိုင်သည်။ သေးငယ်တဲ့ကက်ဘိနက်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ တစ်ခုလုံးကိုမှန်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ၎င်းသည်အာကာသစခန်းများစွာသို့တိုးချဲ့နိုင်သည်။
သေးငယ်သည့်ရေချိုးခန်းနံရံနှင့်ကြမ်းခင်းအလှဆင်မှုများသည်အလွန်အသေးစိတ်ကျစရာမလိုပေ။ တင်သွင်းထားသောတန်းမြင့်ကြွေပြားများများစွာကုန်ကျသည်။ နေရာသေးငယ်သည့်နေရာတွင်အားကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သောစတုရန်းမီတာအတွင်းရှိကြွေပြားများကိုသာအသုံးပြုသည်။
စျေးကွက်တွင်အသုံးအများဆုံးအိမ်သာတစ်ခုလုံးကိုခွဲခြားပြီးနှစ်ခုခွဲထားသည်။ အထွေထွေအိမ်သာတစ်လုံးနှင့်အိမ်သာသည်ပုံသဏ္isာန်ဖြစ်သောကြောင့်အညစ်အကြေးနှုန်းသည်အတော်အတန်မြင့်မားပြီးစျေးနှုန်းမှာကွဲပြားသောအိမ်သာ၏စတိုင်ထက်စျေးကြီးပြီးအချို့သောlargerရိယာများကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ဒါကြောင့်သေးငယ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာအိမ်ခေါင်မိုးကိုခွဲပြီးရွေးပြီးနေရာချွေတာပြီးငွေစုပါ။ ရှည်လျားပြီး ၇၀ စင်တီမီတာခန့်ရှိသော“ ပါးလွှာသော” ခွဲထားသောအိမ်သာထိုင်ခုံသည်သေးငယ်သောရေချိုးခန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရေချိုးခန်းသေးသေးလေးတွင်မှတ်တိုင်အင်တုံကိုတပ်ဆင်ရန်မကြိုးစားပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အောက်ပါကော်လံနေရာကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ၊ အထူးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည့်ရေချိုးခန်းသေတ္တာအတွင်း၌မထည့်ထားပါကကုန်ကျစရိတ် ၂ ခု ထပ်မံ၍ တန်ပြန်အင်တုံ၏ကျဉ်းသောအကျယ်ကို ၀ ယ်ခြင်းကပိုကောင်းသည်။ ပိုက်ဆံပြီးလျှင်ကြီးမားသော undercounter ကက်ဘိနက်ပမာဏကိုဝယ်ယူပါ။ အလေးနှင့်အဆုံးသိုလှောင်ရန်အတွက်သေးငယ်သောဗီရိုငယ်များသို့မဟုတ်ကွင်းခတ်များပေါင်းထည့်ပြီးဆပ်ပြာဟင်းလျာများ၊ မျက်နှာသုတ်ပဝါအရက်ဆိုင်များနှင့်အခြား hardware များ၊ စူပါငွေကြေးနှင့်နေရာချွေတာသောရေချိုးခန်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
၁.၅ မီတာအောက်ရေချိုးသည့်အရှည်သည်အများအားဖြင့် ၇၀ စင်တီမီတာရှိသောအထွေထွေရေချိုးကန်ထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသည်။ ဤရေချိုးကန်သည်အထွေထွေရေကန်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ သေးငယ်တဲ့ရေချိုးခန်းသေးငယ်တဲ့နှင့်နက်ရှိုင်းသောရေချိုးကန်ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
အိမ်သာတိုင်၏အထက်ခန်း၌သာမာန်ရေချိုးခန်းအလှဆင်ထားသော“ လေဟာနယ်ဇုန်” ရှိသည်။ အမှန်မှာအိမ်သာကိုမထိခိုက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနေရာကို သုံး၍ ဗီဒိုနံရံကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ကက်ဘိနက်ကိုအိမ်သာသုံးစက္ကူ၊ လက်သုတ်ပုဝါများ၌ထားနိုင်သည်။ ဆပ်ပြာ, etc ..
အင်တုံ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိဖြစ်စေ၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးအသုံးအဆောင်များကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည့်အပြင်ထိတွေ့ရန်လွယ်ကူသောကြောင့် ၁၀ စင်တီမီတာကျယ်ဝန်းသည့်နံရံအားအင်တုံ၏အပေါ်ဘက်တွင်သုတ်သင်ခြင်းမှာအကျိုးရှိနိုင်သည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကအပေါ် makeup ပုလင်း, ဖြီး, ခွက်လျှော်, etc အောက်မှာထားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်။ faucets ၏အသုံးပြုမှုကိုတားဆီးရန်မ၏စင်မြင့်၏အမြင့်သင့်လျော်သည်, ပစ္စည်းသစ်သား, ဖန်, စသည်တို့ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
7 ~ 8㎡ရေချိုးခန်း
အပြာရောင်နံရံသည်ပင်လယ်၌ရှိသကဲ့သို့ရေချိုးကန်ထဲတွင်ရေချိုးခြင်းသည် ပို၍ ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
ဒီအပြာ ၂ မျိုးကကောင်းတယ်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုသင်ထင်မြင်ပါက၊ ရေချိုးခန်းအတွင်း၌ဓာတ်ပုံနံရံကိုလည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။ သို့သော်သင့်အိမ်တွင်ရေချိုးခန်းတစ်ခန်းထားရှိသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကရေဖိတ်ခြင်းသည်ပျော်စရာမဟုတ်ပါ။
ရောင်စုံ tile collage ကောင်းမွန်သောပွဲစဉ်နှင့်အတူလုံးဝကြောက်မက်ဘွယ်။
လာမှ Mosaic ။
ရှေ့သို့ :: ရေဆေးခြင်းဆေးအပြင်ဘက်တွင်အမှန်လက်တွေ့ကျသည်! သို့သော် အကယ်၍ သင်ဤအချက် ၅ ချက်ကိုသင်ဂရုမစိုက်ပါက၊ နောက်တစ်ခု: 51 ရေချိုးကန်ဒီဇိုင်းကိုတန်ဖိုးထားလေးစားခြင်း၊ ထို့ကြောင့်ဆောင်းရာသီတွင်သင်ပူနွေးသောရေချိုးခြင်းကိုခံယူနိုင်သည်။
အိမ်ထဲရှိရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာသို့ရွေးချယ်သလား။ ဒါမှမဟုတ်ကြမ်းပြင်ယိုစီးမှု ...
Cold Wave ထပ်မံရိုက်ခတ်လာ! ရေချိုးခန်းထုတ်ကုန်များ, အအေးမိတားဆီးဖို့ဘယ်လို?
အိမ်သာတစ်လုံးတွင်ရေချိုးခန်းတစ်လုံးကိုတပ်ဆင်ပါ။ ၅ မိနစ်ပိုသောတိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်ပါ။
အလွန်ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုကိုရရှိရန်အတွက်ရေချိုးခန်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ၅ ချက်